Daraas cusub isdhexgalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amina Nordlund Waa shaqo hage (jobbcoach) oo ka hawl gala Fagersta. Sawirle: Marie Hansson/Sveriges Radio.
Daraas cusub isdhexgalka
La daabacay torsdag 22 november 2012 kl 14.48
Dalkan Sweden ayaa kaalinta xun ka galay dhanka is dhexgalka wadamadda Yurub. Sidaasi waxay ku caday darasaad dhawaan soo baxay oo lagu sameeyay jaamacada Stockholm. Darasaadkan ayaa Sweden barbardhig lagu samaynayaa 15 dal oo kale oo ka mid ah wadamadda Yurub.
Ryszard Szulkin ayaa baadhitaankan ku sameeyay dadka soo galaytiga ku ah dalkan Sweden sidii ay shaqo ku heleen 10-kii sanno ee ugu horeeyay dalkan Sweden ee noloshooda.
- Kuwa jooga dalkan Sweden mudo toban sanno ah ayaan haysan shaqooyiin marka loo eego kuwa ku cusub wadamadda kale ee Yurub joogayna mudadaas dhan tobanka sanno, sidaas waxa sheegaay baadhaha darasaadkan, Ryszard Szulkin
Darasaadkan ayaa Sweden loo barbar dhigay wadamadda sida Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Norway, Denmark. Taaso cadaynaysa in ay Sweden kaalinta koowaad ka gashay dhanka shaqo la'aanta soo galaytiga ku cusub dalkan Sweden.
Dalka Ispeyn oo qudha ayaa shaqo la'aanta ragu kaalinta koowaad ku jirta halka Faransiiskanu haystaan dumarka ugu badan een haysan shaqo.
Sweden ayaa tobonka sanno ee ugu horeeya ay shaqo la'aantu tahay boqolkiiba 23 dhanka raga halka dumarkana ay tiradaasu tahay 27 boqolkiiba, sida ku cad darasaadkan cusub.
Taaso ah mid mudo dheer ku qaadanaysa dadka ku cusub dalkan Sweden.
Waxa kale oo ku cad baadhitaankan in tobankan sanno kadib ay Sweden dhaafayso wadamadda kale dhanka shaqada marka laga hadlayo kooxdan lagu sameeyay darasaadka.
Tiradda shaqo la'aanta kooxdan ayaa hoos u dhacaysa oo noqonaysa boqolkiiba 11 rag iyo dumarba.
-Dhibaatada arrinkani leeyahay ayaa ah in ay mudo dheer qaadanayso balse badi ay helayaan booskooda shaqooyiinka ee bulshadda ayuu sheegay baadha darasaadkani.
Sababta ay Sweden ugu guul daraysatay is dhexgalka ayaa ah in ay Sweden qaabisho soo galayti badan halka wadamadda kale ee Yurub soo qaataan shaqaale shaqooyiin diyaar u yihiin, waa sida ku cad darasaadkee..
Wakhti badan ayey ku qaadanaysaa soo galaytiga in ay suuqa shaqada ka mid noqdaan waayo ma haystaan wax shaqo ah oo sugaysa markay soo galaan dalkan Sweden. Saaso ay tahayna may ku guulaysan Sweden suuqa shaqada ee soo galaytiga sidaas waxa u jeeda madaxa darasaadkan Ryszard Szulkin.
- Ma imanayo qofku iyadoo ay shaqo diyaar u tahay, mana helayo qofku shaqo shan ilaa lix sanno kadib, waa mid guul daro ah. Ayuu sheegay Ryszard Szulkin.
Balse waxa jira dad wadanka ku cusub oo hadana isla markaasba shaqo hela sida u sheegay wasiirka isdhexgalka Erik ullenhag oo booqasho ku joogay magaaladda Fagersta:
Waxaan helnay jid toosan oo dadka ku hagaya shaqada waana mid wanaagsan taas oo ah in ay dadku u soo dhawaadeen suuqa shaqada, dadka aan maanta kula kulmay Fagersta waxa ka mida nin dhawr sanno ka hor samaystay shirkad iyo gabadh hadda ku shaqaysa kalkaaliso caafimaad, waxayna markhaati furayaan in marka aad shaqo heshid iyo xidhiidh dadka u dhashay Sweden ay tahay markaad bulshada si rasmi ah uga mid noqonayso. Ayu sheegay wasiirku.
Balse qaxootiga soo galaytiga ku cusub dalkan Sweden ma la qaybsanayaan sawirkan quruxda badan ee degmaga Fagersta soo bandhigtay.
Amina Nordlund waa gabadh dadka wadanka ku cusub shaqooyiinka la raadisa waxayna badana ka hesha suaal kale markay la kulanto dadyoowga ay gargaarayso ee shaqo raadiska ah.
Waxay ii sheegaan in la isticmaalay, waxay helaan laba sanno oo toobabar ah oo ay la sameeyaan soomaalida kale, ma bartaan afka Swedhishka, mana helaan wax shahaado ah shaqada ay samaynayeen labadaas sanno.
Labadan tusaale ee u wasiirku soo qaatay ayaa ah qaar khaasa sida ay Amina sheegtay.
-Waa fara ku tiris, waxa weeye ilaa afar qof oo ka mida laba boqol oo bila shaqo ah, ayey sheegtay, Amina Nordlund.
Waxay ahayd 1-dii bishii December sannadkii 2010 markii go'aan lagu gaadhaay in isdhexgalka soo galaytiga loo wareejiyo xafiiska shaqadda oo laga wareejiyo degmooyinka dalka.
Hadda ayaa xafiiska shaqadu soo bandhigay darasaad ay ku sameeyeen arrinkan intii u socday ee labadaas sanno kaaso ay ku caday in tobankiiba hal ay shaqo heleen. Halka tobankiiba laba haysteen shaqooyinka ay dawladu dhaqaalaha ku kabto.
Tobankiiba toddoba ayaa bila shaqo ah.